Ny tavoahanginay tsara tarehy dia fitoeran-javatra tsara ho an'ny alikaola misy anao, ny tavoahanginay dia azo atao amin'ny fotsy fotsy sy fotsy fotsy, tsingerina famokarana haingana, kalitao tsara, izahay no mpitarika amin'ny indostrian'ny tavoahangy, manome antoka ny kalitao izahay. Ireo tavoahangy fitaratra vato matevina ireo dia tsara sy matanjaka. Mora entina amin'ny fety, daty, gym na asa. Aza matahotra ny hitondra azy ireo na aiza na aiza. Ny tavoahangy miloko dia mazava, madio. Ny fefy dia mangarahara mangarahara ary azo ovaina. Fitaovana - maharitra maharitra ...